युबट्युब ट्रेन्डिङमा ११ नम्बरमा पर्न सफल पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ लाई रातारात युबट्युबबाट हटाइएपछि आक्रोशले भरियो सामाजिक सञ्जाल ! «
युबट्युब ट्रेन्डिङमा ११ नम्बरमा पर्न सफल पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ लाई रातारात युबट्युबबाट हटाइएपछि आक्रोशले भरियो सामाजिक सञ्जाल !
काठमाडौं, ५ फागुन । यो युग कतातिर जाँदैछ ? सर्वसाधारणको लागि राणाकाल भन्दा पनि अहिलेको शासन खरो रुपमा उत्रिएको प्रमाण सरकारको हरेक गतिविधिले देखाइरहेको छ । वाकस्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? अजिव लागिरहेको छ ।
गायक पशुपति शर्माको भ्रष्टाचार विरोधी ‘लुट्न सके लुट…’ बोलको गीत यूट्यूबबाट हटाएपछि सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला आक्रोश नै आक्रोशले भरिएको छ ।
गायक शर्माले सत्ता रुढ दल निकट युवा संघको दबाबमा स्वयम गायक शर्माले गीत हटाएपछि सो गीत हटाउ सरकारै लागिपरेको भन्दै सरकार, सत्तारुढ दल र युवा संघप्रति आक्रोश पोखिएको हो ।
गायक शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर आफै गीत हटाएको र परिमार्जनसहित फेरि आउने बताएका छन् । उनले कसले दबाब दिएको हो भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन् । तर, यूवा संघको फेसबुक पेजमा पशुपति शर्मालाई बहिस्कार गर्न उद्धि जारी गरिएपछि गायक शर्माले दबाबमा सो गीत हटाएको चर्चा छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा कसै कसैले त पुराना पञ्च्यातकालिन दिनहरु फर्केकोसम्म टीप्पणी गरेका छन् । कसैले गायक शर्मामाथि दबाब दिएर गीत हटाउन लगाएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका केही आक्रोशहरु ।
को छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा बोलको गीतको भिडियो शनिबार साझँ सम्म नेपालको युबट्युब ट्रेन्डिङमा ११ मा थियो। तर उक्त गीत हटाइएको छ र च्यानलनै बन्द गरिएको छ ।
मास्टर डिग्री सकेर पनि जागिर खान नसकेको एक युवालाई अर्का एकजनाले लुट्न ‘प्रेरित’ गरिरहेको कथा गीतमा थियो।
ुलुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट‘ बोलको यो गीत नेपालमा सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा भ्रष्टचारका कयौँ घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला शर्माको यो पछिल्लो गीत आएको हो। वाइडबडी जहाज किन्दा आर्थिक घोटाला भएको, सुनकाण्ड र ठूलै नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको लगायतका विषय शर्माको गीतका विषय छन्।
भिडियोमा शर्मासहित मञ्जु विक र प्रज्योल भण्डारीले अभिनय गरेका छन्। पशुपति शर्माले गीत युट्वबाट हटाएपछि फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका छन् ।
आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्द साथै मेरा प्यारा शुभचिन्तक ज्यु हरुमा सादर नमस्कार